အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကျန်ခဲ့သည့်ကိစ္စ လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အပြစ်ပုံချခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ယခင်ကတည်းက မပါလာသည့် စာပိုဒ်ဖြစ်ကြောင်းပြော ~ Myanmar Online News
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကျန်ခဲ့သည့်ကိစ္စ လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အပြစ်ပုံချခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ယခင်ကတည်းက မပါလာသည့် စာပိုဒ်ဖြစ်ကြောင်းပြော
9:03 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြထားသည့် ဥပဒေမူကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဖေဖော်ဝါရီ၂၅ ရက်မနေ့ကစတင်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ စစချင်းအချိန်မှာပဲ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စန်းချစ် က ပုဒ်မ ၂၆၂. မှ ပုပ်မခွဲ တစ်ခုတွင် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ကျန်နေသည့် ကိစ္စကား ထောက်ပြခဲ့ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြဥာဏစိုးက ၎င်းတို့ကော်မတီအနေနဲ့ ဘာမှ မပြင်ဆင်ထားကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့သဖြင့် တပ်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အချို့နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ပွတ်တိုက်မှုတွေရှိခဲ့သဖြင့် လွတ်တော်နာယက ကြီးမှ ထိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည် ။
၎င်းကဲ့သို့ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်လုံးကျန်နေသည့်ကိစ္စအား နာယကကြီးမှ စီစစ်ခဲ့ရာ လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများစာစီစာရိုက်ရာတွင် ကျန်နေခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများကိုတောင်းပန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည် ။
၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းအချိုနဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အဆို/မေးခွန်းများစီစစ်ရေး နှင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေရေးဌာန မှ ဒေါ်ဆုမြတ်မွန်က ကျမတို့လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေက အဲ့ဒီဖွဲစည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကပေးပို့လာတဲ့ အချက်အလက် အကုန်လုံးကို ကွန်ပျူတာစာစီ သေချာပြန်ကာလှန်ကာ စီစစ်ပြီးမှမိတ္တူကူးပြီး ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီကိုပြန်ဖြန့်ပေးရတာပါ ။
ဒီနေ့မနက် ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာ ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေ မမှားပါဘူး သူတို့ပေးတဲ့မူရင်းလဲရှိပါတယ် ပေးခဲ့ကတည်းက ပါမလာလို့ စာစီတဲ့အထဲပါမသွားတာပါ ဒါကို ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေ ပေါ့လျှောလို့ဖြစ်သွားရတာပါဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ စာလုံးတစ်လုံးနှစ်လုံးကျန်ခဲ့ရင်တောင် အပြစ်တင်လို့မပြီးနိုင်ကျတဲ့သူတွေပါ မနက်ကလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပြောမနေနဲ့ မီးကုန် ယမ်းကုန်ဆူပွက်နေကျမှာပေါ့ အခုတော့ဘယ်သူ့လိုအပ်ချက်လိုလို ဘယ်သူ့အပြစ်လိုလို နဲ့လုပ်နေကျတယ် ၊ ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ တနေကုန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောခံနေရတာ တွေတွေ့ပါတယ် ဒီလိုပဲ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိ ပဲဝန်ထမ်းတွေကို ပုံချခံရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးတစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေဆို နုတ်ထွက်စာတင်ပြီးထွက်တော့မယ်တွေ တောင်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဖွဲစည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ ရဲ့ကပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်း အချက်အလက်တွေနဲ့ကန့်လန့်ဖြတ်ဇယားအပါအဝင် ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဥ်တွေကို ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးကပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် စီစစ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေရေးဌာနကို ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပေးခဲ့စဥ်ကပင် ၎င်းစာပုဒ်မှာ ပါမလာတာဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်း ကိုယ်၌ကသာ ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဝန်ထမ်းတွေကလဲ ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
Ref-Forward media group #Myanmar_Online_News
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်ကျန်ခဲ့သည့်ကိစ္စ လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အပြစ်ပုံချခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ယခင်ကတည်းက မပါလာသည့် စာပိုဒ်ဖြစ်ကြောင်းပြော
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြထားသည့် ဥပဒေမူကြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ၂၅ ရက်မနေ့ကစတင်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ စစချင်းအချိန်မှာပဲ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စန်းချစ် က ပုဒ်မ ၂၆၂. မှ ပုပ်မခွဲ တစ်ခုတွင် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ကျန်နေသည့် ကိစ္စကား ထောက်ပြခဲ့ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြဉာဏစိုးက ၎င်းတို့ကော်မတီအနေနဲ့ ဘာမှ မပြင်ဆင်ထားကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့သဖြင့် တပ်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အချို့နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ပွတ်တိုက်မှုတွေရှိခဲ့ သဖြင့် လွတ်တော်နာယက ကြီးမှ ထိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည် ။
၎င်း ကဲ့သို့ စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်လုံးကျန်နေသည့်ကိစ္စ အား နာယကကြီးမှ စီစစ်ခဲ့ရာ လွှတ်တော်ဝန်ထမ်း များစာစီစာရိုက်ရာတွင် ကျန်နေခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများကိုတောင်းပန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည် ။
၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းအချိုနဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အဆို/မေးခွန်းများစီစစ်ရေး နှင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေရေးဌာန မှ ဒေါ်ဆုမြတ်မွန်က ကျမတို့လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေက အဲ့ဒီဖွဲစည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကပေးပို့လာတဲ့ အချက်အလက် အကုန်လုံးကို ကွန်ပျူတာစာစီ သေချာပြန်ကာလှန်ကာ စီစစ်ပြီးမှ မိတ္တူကူးပြီး ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီကိုပြန်ဖြန့်ပေးရတာပါ ။
ဒီနေ့မနက် ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာ ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေ မမှားပါဘူး သူတို့ပေးတဲ့မူရင်းလဲရှိပါတယ် ပေးခဲ့ကတည်းက ပါမလာလို့ စာစီတဲ့အထဲပါမသွားတာပါ ဒါကို ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေ ပေါ့လျှောလို့ဖြစ်သွားရတာပါဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ စာလုံးတစ်လုံးနှစ်လုံးကျန်ခဲ့ရင်တောင် အပြစ် တင်လို့မပြီးနိုင်ကျတဲ့သူတွေပါ မနက်ကလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပြောမနေနဲ့ မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆူပွက်နေကျမှာပေါ့ အခုတော့ဘယ်သူ့လိုအပ်ချက်လိုလို ဘယ်သူ့အပြစ်လိုလို နဲ့လုပ်နေကျတယ် ၊ ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ တနေကုန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောခံနေရတာ တွေတွေ့ပါတယ် ဒီလိုပဲ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိ ပဲဝန်ထမ်းတွေကို ပုံချခံရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးတစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေဆို နုတ်ထွက်စာတင်ပြီးထွက်တော့မယ်တွေ တောင်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဖွဲစည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ ရဲ့ကပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်း အချက်အလက်တွေနဲ့ကန့်လန့်ဖြတ်ဇယားအပါအဝင် ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးကပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် စီစစ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေရေးဌာနကို ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပေးခဲ့စဉ်ကပင် ၎င်း စာပုဒ်မှာ ပါမလာတာဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်း ကိုယ်၌ကသာ ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဝန် ထမ်း တွေကလဲ ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။